Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » प्रचण्डको आक्रोस : पूर्वराजाका दासहरुले सरकार, शासन ब्यबस्थानै फेर्ने अभिव्यक्ति दिने ?
प्रचण्डको आक्रोस : पूर्वराजाका दासहरुले सरकार, शासन ब्यबस्थानै फेर्ने अभिव्यक्ति दिने ?
१९ साउन, सिन्धुली ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वराजाका दासहरुले सरकार मात्र नभई शासन व्यवस्था नै फेर्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आक्रोश ब्यक्त गरेका छन । साथै उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जनताले नागार्जुन दरबारबाट निस्काशन गर्ने चेतावनी दिए ।
सिन्धुली र रामेछापको खाँडादेवी जोड्ने सुनकोसी नदीमा बनेको पुल उद्घाटन गर्ने क्रममा बोल्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्ड भने- ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका क्रममा शरण पर्न आएकाले ज्ञानेन्द्रलाई संरक्षण दिएका हुन्, त्यसैले पूर्वराजाले बढी बकबक गरिरहे जनताले नागार्जुनबाट समेत निकाल्नेछन् ।’ उनले पूर्वराजा भन्दा पनि राजा राजा भन्दै उफ्रने तर्फ आफ्नो भनाई इङित रहेको बताएका छन ।
अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्वराजासहित उनका समर्थकहरुलाई सच्चिन पनि अनुरोध गरेका छन् । यदि नसच्चिए भविश्यमा हविगत नराम्राे हुने उनकाे भनाइ थियाे ।पूर्वराजाका दासहरुले सरकार मात्र नभई शासन व्यवस्था नै फेर्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रचण्ड आक्राेशित बने । साथै उनले अहिलेको व्यवस्था जनताको त्याग र बलिदानले आएकाले यसको सम्मान गरी अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । प्रचन्ड आजै काठमान्डौ फर्किएका छन ।